Ama-Sideboard Sideboards angafika ngezitayela eziningi futhi enezici eziningi ezahlukahlukene. I-sideboard yanamuhla ivame ukuba bushelelezi futhi ingaba nemilenze emide kancane kunebhodi eseceleni yendabuko. Lapho efakwa egumbini lokuphumula, amabhodi asemaceleni angasebenza njengesikhungo sokuzijabulisa. Ngenxa l ...
Iqiniso ngamathebula ekhofi nokuthi kungani udinga eyodwa
Sihlala sithola imibuzo, futhi okunye esivame kakhulu ngukuthi udinga itafula lekhofi. Buza noma yimuphi umklami wangaphakathi bazokutshela, sebenza ifomu lamacilongo kuzo zonke izimo. Kungani udala igumbi elihle uma ungasoze walisebenzisa? Kungakho kubaluleke kakhulu ukuthola ukuthi uzosebenzisa kanjani i ...
Izingcezu Zefenisha Ezibalulekile Zonke Izidingo Zokulala
Ngezindlela eziningi, igumbi lokulala liyikamelo elibaluleke kakhulu kunoma iyiphi indlu. Kukusiza ukuthi uphumule futhi uvuselele ngemuva kosuku olude, futhi ukwakhiwa kwekamelo lakho lokulala kufanele kuhlose ukudala indawo efanelekile ekhuthaza ukulala. Ukutshala imali kwifenisha elungile kungakusiza ukufeza lokhu futhi uthuthukise ikhwalithi ...
I-Hebei Yifan Wood Industry Co., Ltd.
AUG: Amaklayenti avela e-Arab ahlola izimpahla zethu futhi avakashele imboni yethu u-Ahmed wakhuluma nathi isikhathi eside, ngo-20 AUG ufisa ukuza azovakashela, ngemuva kokubheka amasampula ethu efemini, wasitshela ukuthi unemidwebo ethile afuna ukuyishintsha , sikhulume neyethu. unjiniyela futhi wenze ...
Hlobo luni lokhuni oluqinile?
Hlobo luni lwokhuni oluqinile oluhlanganisiwe? I-Hardwood yigama elijwayelekile lohlobo lwokhuni olunobuningi obukhulu nobulukhuni, njenge-oki, umlotha, umlotha, i-birch, i-elm, i-jujube, njll. I-oki yasekhaya, umlotha, umlotha, i-birch, i-elm, i-jujube, konke kungokokhuni oluqinile.
Yini iCiti pine? Yikuphi ukusetshenziswa okuyinhloko kwe-Douglas fir wood?
Igama lesiShayina: UDouglas fir / yellow cedar English Igama: UDouglas fir / d-fir Umndeni: I-Pinaceae Genus: Ibanga le-Taxodium elisengozini: Izitshalo zasendle ezivikelekile zokhiye kazwelonke weBanga II (ezivunyelwe nguMkhandlu Wombuso ngo-Agasti 4, 1999) Isihlahla esikhulu se-Evergreen, phezulu kuya kumamitha ayi-100 ukuphakama, i-DBH ifike kumamitha ayi-12. Amagxolo ...